के डोनाल्ड ट्रम्पले फेसबुकको बलमा राष्ट्रपति चुनाव जितेका हुन् ? डाटा दुरुपयोगबाट यसरी मच्चिन सक्छ विश्वंस ? | Rajmarga
के डोनाल्ड ट्रम्पले फेसबुकको बलमा राष्ट्रपति चुनाव जितेका हुन् ? डाटा दुरुपयोगबाट यसरी मच्चिन सक्छ विश्वंस ?
यो कथामा कयौ सनसनीखोज कुरा छन् ।अनैतिक व्यवहारको आरोप छ, भावनाका साथ खेलवाड छ र तथ्यांकको प्रयोगको कुरा छ। फेसबुक र तथ्यांकको कारोबार गर्ने कम्पनी ‘क्याम्ब्रिज एनालिटिका’ यो कथाको केन्द्रमा छ।
उमाथि मानिसहरुको निजी जानकारी र त्यससँग सम्बन्धित डाटा गलत ढंगले प्रयोग गरेको आरोप छ । भनिन्छ कि ‘क्याम्ब्रिज एनालिटिका’ले फेसबुकबाट प्राप्त डाटाको सहयोगमा सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन र बेलायतमा ब्रेक्जिटमा भएको जनमत संग्रहको नतिजालाई प्रभावित गर्ने कोशिस गरेको थियो ।
दुवै कम्पनीले आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुले केही पनि गलत काम नगरेको दावी गरेका छन् ।
क्याम्ब्रिज एनालिटिका एउटा बेलायती कम्पनी हो । यसका मालिकहरुमा रिपब्लिकन पार्टीलाई चन्दा दिने अरबपति व्यापारी रोबर्ट मर्कर पनि छन् ।
यो कम्पनीमाथि सन २०१६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको नतिजालाई प्रभावित पारेको आरोप छ। यो कम्पनीमाथि लाखौ फेसबुक प्रयोगकर्ताको एकाउन्टको जानकारी उनीहरुको अनुमतिबिना नै प्रयोग गरेको आरोप छ। यसका लागि कम्पनीले यस्तो सफ्टवेयर तयार गरेको छ, जसबाट मानिसहरुको राजनीतिक रुझानको अन्दाजा लगाउन सकिन्छ ।
क्याम्ब्रिज एनालिटिकामाथि के छ आरोप ?
बेलायनी समचार च्यानल ‘न्युज ४’ले डाटा एनालिटिक्स फर्म क्याम्ब्रिज एनालिटिकाका अधिकारीहरुसँग भेट गर्नका लागि आफ्नो अन्डरकभर रिपोर्टर पठायो ।
क्याम्ब्रिज एनालिटिकालाई डोनाल्ड ट्रम्पलाई चुनावी जीत दिलाउन सहयोग गरेको श्रेय दिने गरिन्छ । रिपोर्टरले कम्पनीका अधिकारीहरुसामु आफूलाई श्रीलंकाको विजनेशम्यानका रुपमा प्रस्तुत गरे र भने कि उनीहरु देशको स्थानीय चुनावलाई प्रभावित गर्न चाहन्छन् ।
क्याम्ब्रिज एनालिटिकाका बोस एलेक्जेन्डर निक्स स्टिंग अपरेशनमा ती रिपोर्टर सामू स्पष्टसँग यसो भन्दै देखिए कि कसरी उनको कम्पनीले राजनीतिमा क्षति पुराउन सक्दछ। उनीहरुको छवि धमिल्याउनका लागि कसरी अभियान चलाउन सक्दछ । कल गर्लका साथ उनीहरुलाई पक्राउ गराउन सक्दछ र यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सक्दछ, जसमा विरोधी क्यामेराका सामु रंगेहात घुस पक्राउ गराउन सकिन्छ ।
यता क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले ‘न्युज ४’ च्यानलमो दावी अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीका अनुसार डकुमेन्ट्रीलाई सम्पादित गरिएको र कुराकानीको पटकथाको उद्देश्यलाई पूरा गराउनका लागि लेखिएको हो । कम्पनीले यो पनि दावी गरेको छ कि कुराकानीको सुरुवात ‘न्युज ४’का रिपोर्टरले नै गरेका थिए।
फेसबुकको भूमिका के ?
सन् २०१४ मा फेसबुकमा एउटा क्विजमा प्रयोगकर्ताहरुलाई आफ्नो व्यक्तित्वका मारेमा जान्ने अवसर दिइयो । क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीका प्रोफेसर एलेक्जेन्डर कोगानले यो क्विज डिजाइन गरेका थिए । (क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको क्याम्ब्रिज एनालिटिकासँग कुनै सम्बन्ध छैन)
त्यतिबेला फेसबुकमा चलिरहेको ऐप्स र गेम्समा यो आम कुरा थियो कि क्विजमा भाग लिरहेका व्यक्तिको जानकारीका साथै उसका साथीसँग जोडिएका डाटा लिइन्थ्यो । यद्यपि फेसबुकले अब धेरै परिवर्तन गरेको छ र डाटा डेभलपर्स अब यसप्रकारको युजरका टाडा संकलन गर्न सक्दैनन् ।
क्याम्ब्रिज एनालिटिकाका लागि काम गरिसकेका क्रिस्टोफर वाइलीको आरोप छ कि यो क्विजमा २७०,००० जनाले भाग लिए र करिब पाँच करोड मानिससँग सम्बन्धित डाटा उनीहरुको अनुमतिबिना संकलन गरियो । यसमा अधिकांश मानिस अमेरिकी थिए र यो क्विजमा भाग लिनेहरुको फ्रेन्ड लिस्टमा थियो ।
क्रिस्टोफर वायलीको दावीअनुसार यो डाटा क्याम्ब्रिज एनालिटिकालाई बेचियो र ती प्रयोगकर्ताको राजनीतिक रुझानको हिसावबाट ट्रम्प समर्थक प्रचार सामग्री फेसबुक विज्ञापनको माध्यमबाट उनीहरुसम्म पुराइयो ।
यता क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले यो सबै आरोप अस्वीकार गरेको छ। उसका अनुसार ट्रम्पको चुनावी अभियानलाई उपलव्ध गराइएको सेवामा यो सबै कुरा समावेश थिएन ।
के यो फेसबुकको नियमविपरीत थियो ?
यो डाटा त्यतिबेला फेसबुकको नेटवर्क प्रयोग गरेर जम्मा गरिएको थियो । कयौ डाटा डेपलपर्सले यसको फाइदा उठाएका थिए । तर फेसबुकलाई आफ्नो युजर्ससँग सम्बन्धित यो डाटा अन्य पार्टीका साथ शेयर गर्ने अधिकार थिएन ।
एउटा कुरा अर्को पनि छ कि क्विजमा माग लिने सहभागीहरुलाई यो कुराको थोरै पनि आशंका थिएन कि उनीहरुको जानकारीहरुको प्रयोग डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियानमा गरिनेछ ।
फेसबुकका अनुसार जब उसलाई थाहा भयो कि फेसबुकको नियम तोडिदैछ तब उसले यो क्विज एपलाई हटाइदियो र क्विज तयार गर्नेसँग यसको आश्वासन माग्यो कि युजर्सका जानकारी डिलिट गरिनेछ ।
क्याम्ब्रिज एनालिटिकाको दावी छ कि यसले कहिले पनि उक्त डाटा प्रयोग गरेन र फेसबुकको आग्रहमा त्यो सबै डिलिट गरिएको थियो । फेसबुक र ब्रिटेनको इन्फरमेशन कमिश्नर दुवै नै यो जान्न चाहन्छन् कि यो डाटा साँच्चिकै डिलिट गरिएको थियो । क्रिस्टोफर वाइलीको दावीअनुसार यस्तो भएको थिएन ।
सरकार के गरिरहेको छ ?
अमेरिकी सिनेटरहरुले माग गरेका छन् कि फेसबुकका फाउन्डर मार्ग जुकरबर्गलाई कंग्रेसमा आएर बयान दिन लगाइयोस र यो सोधियोस कि युजरको डाटालाई उनले कसरी सुरक्षित राख्छन् ।
युरोपियन संसदका प्रमुखले भनेका छन् कि उनी यो कुराको जाँच गराउने छन् कतै फेसबुकको युजरको टाडाको प्रयोग गलत तरिकाले त गरिएको छैन ।
बेलायती प्रधानमन्त्री टेरिजा मेका प्रवक्ताले भनेका छन् कि उनी यो जानकारी सार्वजनिक भएपछि निकै चिन्तित छन् । बीबीसी हिन्दीबाट अनुदित
Previous post: के तपाईलाई थाहा छ ? यस्ता छन् डर लाग्दो सपना देख्नुका कारणहरु
Next post: पुरुष वीर्यमा शुक्राणुको कमी, जाँच गराइहाल्नुस, यस्ता गम्भीर परिणाम आउन सक्छ